Akụkọ - Ahụkarị nke polylactic acid bioplastics
PLA n'onwe ya bụ nke polyester aliphatic, nke nwere njirimara bụ isi nke ihe polymer n'ozuzu, arụmọrụ nhazi nke ọma na obere ịda mbà. Enwere ike iji ya maka ọtụtụ plastik sịntetik. A na-eji ya eme ihe nkwakọ ngwaahịa, akụrụngwa ngwa ụlọ na ngwaahịa ọgwụ ndị na-emebi emebi.
Fiber extrusion: akpa tii, uwe; ọgwụ na ịkpụzi: akpa, disposable tableware; onyinye: osisi na PMMA, PC, ABS; ihe na-edozi ahụ: akpa eji megharịa ọnụ, tray, iko, capsule kọfị; ịkpụzi ịkpụ: Mmiri na-enweghị ikuku, ihe ọ juiceụ juiceụ ọhụrụ, karama ịchọ mma; ọdịdị nke ihe a na-emetụtakwa ọrụ obibi 3D niile na-atọ ụtọ. Otú ọ dị, ọnọdụ okpomọkụ dị nro nke PLA dị ala, n'ihi ya, ọ gaghị adabara mmiri mmiri ọkụ.
Mmetụta nke usoro iwu gburugburu ụwa gbanwere na ụlọ ọrụ bioplastics
N’ọnwa Ọgọstụ afọ 2017, mba China nyere iwu mmachibido iwu mkpofu ahịhịa, nke butere mkpụmkpụ mkpụmkpụ plastik na mba ndị mepere emepe na mba dị mkpirikpi. N’ihi nke a, European Union ewepụtala ngwa ngwa plastik amachibidoro iji ngwaahịa plastik na-adịghị emebi emebi tupu 2022. Enwere mba iri isii na asaa ewepụtala amụma yiri nke ahụ n’ụwa niile, nke na-eweta nnukwu ohere maka plastik na-emebi emebi.
Na June 9, 2018, Canada, France, Germany, Italy, United Kingdom na European Union bịanyere aka na "iwu plastik charter" n'oge nzukọ G7. Nke a bụ akwụkwọ na-akwadoghị iwu, nke ewepụtara dịka ihe mgbakwunye na nsonaazụ nke nzukọ G7, nke nwere ọtụtụ nkwa na omume na plastik mmiri na microplastics. United States na Japan n'ime ìgwè asaa abanyeghị akwụkwọ a.
Ima ndi ahia banyere nchedo gburugburu
Bioplastics, compostable, biodegradable: site na plastik nke taa rue ọdịnihu na-adigide. Ihe mkpofu ahihia abughi ahihia. Ọ bụrụ na ejiri ya mee ihe nke ọma ma degharịa ya, ọ bụ akụ na ụba mmadụ. Iji merie ihe ịma aka a, anyị kwesịrị ịtụgharị uche n'ihe atụ anyị nke ịzụ ahịa ugbu a ma nyochaa isi ihe kpatara mmetọ plastik. Mee bioplastics na imegharị ihe na usoro ihe eji eme ihe na akụ na ụba maka plastik.
Eco Cling Kechie Sugar Kechie, Akpa mkpofu ahịhịa na-ere ere, Ihe nkiri a na-ere ere na-ere ere, Akpa Compostable, Akpa mkpofu Compostable, Kechie Biodgradable Cling Kechie,